lirik lagu legacyleague - homeland | lirik.web.id
lirik lagu legacyleague - homeland
lirik lagu legacyleague – homeland
mgbe m na -akpa. ndị m kpọrọ m asị na-ama m jijiji. tie mkpu n’ala a. ndị niile kpọrọ m asị chọrọ ka m laa. achọrọ m ịlaghachi n’ụlọ. enwere m ike ịbụ onye isi ojii mana m bụ onye isi abụọ nigerian. ndị na-akpọ m asị nwere ike ịkpọ asị, ha nwekwara ike ịzọ azụ. anaghị m enye nlele. kedu ihe kpatara america ji nwee ọtụtụ abụba. naanị ihe m chọrọ bụ ịlaghachi n’ụdị m. naanị ihe m chọrọ bụ izute nwanne nna nwanne babatunde
islọ akwụkwọ bụ ihe mkpofu. gịnị kpatara anyị ga-eji aga. ọ ga-akara m mma ịnọ na ngosi m. iwe were ndị mmadụ. mgbe ahụ kpọrọ m na ndị enyi m asị. ahụrụ m america n’anya ma ala nna m karịa. chukwu zitere m ụlọ
amalitere ya na ihe ruru unyi. ugbu a aga m aga ịkwụsị. ndị na-eti mmiri ga-akwụsịtụ ruo mgbe m kụrụ ihe dị elu .enwere m ike ịnweta iberibe. naanị ihe m chọrọ bụ izute babatunde. na-akụ abụba ahụ. na -akpọ ụbọchị dum, kwa ụbọchị. site n’isi ututu rue ututu. anyi achikota dika
- lirik lagu legacyleague
lirik lagu robert – le tour de france
lirik lagu reckless kelly – baby’s gone blues
lirik lagu the game – carmen electra
lirik lagu jaytekz – love me not
lirik lagu solution .45 – bleed heavens dry